Aqalka Sare oo maanta meel marinaya Hindisaha Sharciga Guddiga Ladagaalanka Musuqa – Kalfadhi
Aqalka Sare oo maanta meel marinaya Hindisaha Sharciga Guddiga Ladagaalanka Musuqa
December 4, 2018 Kalfadhi
Kulankii 9-aad ee Golaha Aqalka Sare ayaa lagu wadaa iney maanta Senataradu uga doodaan Hindisaha Sharciga Dhismaha Guddiga Ladagaalanka Musuq-maasuqa ee Madaxa-banaan. Hindisahan ayey Senataradu uga soo doodeen kulamadoodii hore. Kulankii ugu dambeeyey ee ay yeeshaan waxaa, markii ay saacado ka doodayeen kadib, ay isugu balameen iney sii wadaan aqrinta 3-aad ee Hindisaha Talaadadan.
Markaas, waxaa Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka, Xasan Xuseen Xaaji, oo joogay kulankaas uu Golaha ka hor sheegay inuu Hindise Sharciyeedkan la kowsan doono Guddigiisa, marka uu xeer noqdo. “Illaa hadda, majirto wax Guddi ah oo noo dhisan, lamana dhisi karo, iyadoon sharcigaan ansax noqon” ayuu yiri Wasiir Xasan. Markaas waxa uu beeninayey warar sheegayey iney Wasaaraddu bilowday dhismaha guddiga, iyadoon hindisaha sharcigiisa wali Xeer noqon.
Senatarada, oo ay ku jiraan Guddoonka Golaha, ayaa soo bandhigay qodobo u baahan in wax laga bedelo, sida cidda awoodda ku leh magacaabista iyo ansixinta Guddoonka Sare ee Guddigaas, isagoo madax-banaan la dagaalami doona musuq-maasuqa.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cadi Xaashi Cabdullaahi, ayaa Guddiga hindisahan gacanta ku haaya u sheegay in lagu soo daro dhamaan waxyaabaha laga sheegay Golaha Sabtidii, dibna laysugu soo laabto kulanka xiga ee Golaha oo maanta ah. Waxaa la filayaa in, haddii uu kulankoodu dhaco, ay meel mariyaan Hindisaha, waxa uuna markaas dib ugu noqon doonaa Golaha Shacabka oo eegaya wixii uu kusoo kordhiyey Aqalka Sare.